Why Her? – Gold Channel Movies
Jun. 03, 2022 SBS
Why Her? (왜 오수재인가?)
ပရိတ်သတ်တွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ Rom-Com Queen Seo Hyun-Jin နဲ့ True Beauty အပြီးမှာ Sound of Magic နဲ့ ကြည့်ရှုသူတွေကိုဖမ်းစားခဲ့ပြီး ယခုတဖန် ပရိတ်သတ်ရှေ့ရောက်လာမယ့် Hwang In-Yeop တို့ရဲ့ ဒရာမာသစ် Why Her? ကို ကြည့်ရှုဖို့အချိန် ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။
Oh Soo-Jae (Seo Hyun-Jin) ဟာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့အကောင်းဆုံး ဥပဒေရုံးဖြစ်တဲ့ TK ဥပဒေရုံးရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ အထက်မြက်ဆုံးရှေ့နေတစ်ဦးပါ။ Soo-Jae ဟာ အမှုတိုင်းကို နိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်ပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဥ်းတွေနဲ့ နေတတ်သူပါ။ ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုနောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ရမှ မထင်မှတ်ထားတဲ့အမှုတစ်ခုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မိပြီး ဥပဒေကျောင်းတစ်ခုမှာ အချိန်ပိုင်းပါမောက္ခအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ ပြောင်းရွေ့ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါကျောင်းမှာ Oh Soo-Jae ဟာ Gong Chan (Hwang In-Yeop) နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Gong Chan ကတော့ နာကျင်စရာ၊ ရင်နင့်စရာအတိတ်တွေရှိခဲ့ပေမယ့် အရင်လိုပဲ နွေးထွေးတဲ့စိတ်ထားကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲလူငယ်လေးပါ။ ဒီလူငယ်လေးဟာ အချိန်ပိုင်းပါမောက္ခကိုမှ ချစ်မြတ်နိုးမိပြီး ချစ်ရသူအတွက် ဘာမဆိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူငယ်လေးလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာကျင်စရာအတိတ်က ဘာများဖြစ်နေမလဲ။ ချစ်ရသူကိုရော ကာကွယ်နိုင်မှာလား။
Choi Tae-Kook (Heo Jun-Ho) ကတော့ TK ဥပဒေရုံးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး တရားမျှတမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ သူ့အလိုလောဘကိုသာ ကြည့်တတ်တဲ့သူပါ။
ဒီကာရိုက်တာတွေကြားက ဆက်နွှယ်မှုက ဘာများဖြစ်နေမလဲ။ အတိတ်က မတရားမှုတွေကို ​ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား။ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင်တွေက အကုန်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေပဲမို့ ဒီလရဲ့ကားသစ်တွေထဲမှာ လုံးဝလက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ကားကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် GC Drama နဲ့အတူတူ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။
Subtitlers : Elasa,Anna,Thae & Dara
Original title 왜 오수재인가
ayemonkyawJune 16, 2022Reply